Iimfihlakalo eziqaqambileyo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Namhlanje siza kuthetha Iimfihlakalo ezikhanyayo, amacandelo abalulekileyo erosari, abalisa ngeziganeko ezibalulekileyo ebomini bukaYesu. Funda ukubaluleka kwamaxesha eNkosi yethu uYesu Kristu kunye namagama ayo.
ubomi abadala bukaYesu
1 Iimfihlakalo eziqaqambileyo, ubomi bukaYesu basesidlangalaleni
1.1 Zithini na ezi mfihlakalo?
1.1.1 Ubhaptizo lukaYesu
1.1.5 Iziko loMthendeleko
Iimfihlakalo eziqaqambileyo, ubomi bukaYesu basesidlangalaleni
Irosari, sisixhobo esibalulekileyo sokunxibelelana noThixo, ibinzana ngalinye kunye nelizwi elithethiweyo lisebenza ukunxibelelana ngakumbi neNkosi kunye nonyana wayo, uYesu. Kodwa irosari ayisiyoncwadi yemithandazo kuphela, ikwayincwadi encinci eshwankathela ngendlela ebalulekileyo ubomi bukaYesu emhlabeni ukuya kwinqanaba lokuvuka kwakhe.
Irosari yincwadi ebaluleke kakhulu kubomi bamaKatolika, ukuba sisikhokelo sabantwana beNkosi ukuze bakwazi ukuthandaza nokubalisa ngeziganeko ezamehlelayo nonina, amaxesha ahlukeneyo angokobuthixo kwaye egcwele ubunzima obungqonge ubomi yeNkosi. Inemfihlakalo kunye neempendulo kwiindumiso, ukongeza kwimithandazo ethile kunye neenkcazo ezimfutshane indlela yokuthandaza irosari, ukuze ube nendlela encinci yokukwazi ukuthandaza ngokufanelekileyo.
Iimfihlakalo zezinye zezinto ezisisiseko kule ncwadi, ngenxa yokuqulathiweyo kunye nengcaciso, ukubalisa nokuchaza amaxesha abalulekileyo awathi uYesu nonina bahamba ngawo, bebalisa amaxesha anjengobuntwana bakhe okanye indlela iNtombikazi enguMariya eyambona ngayo ebethelelwa emnqamlezweni. ., ukuze ekugqibeleni ndibone ukuvuswa kwakhe. Iimfihlakalo zahlulwe zantathu, nangona kunjalo, nganye kuzo isixelela ngeziganeko ezintlanu ezibalulekileyo.
Imfihlelo nganye ineentsuku zayo ezahlukileyo zokuba bakwazi ukuthandaza nokubalisa, kuba badityaniswa nexesha elichithwe yiNkosi uYesu Krestu, phakathi kwazo kukho elikhanyayo, elibalisa ngobomi bukaYesu kunye neyona mizuzu yakhe ibaluleke kakhulu. zibalulekile ekukhuleni kwabo.
Zithini na ezi mfihlakalo?
Iimfihlakalo ezikhanyayo zezinye zeemfihlakalo zokuqala, kuba zibala iziganeko ezenzeka phambi kwezo zibuhlungu nezizukileyo, ezinika umbono nembono yobomi bakhe bobuKristu, nkqu nokuthanda kwakhe. Kuzo, ubomi basesidlangalaleni bukaYesu buchazwa ngendlela emfutshane, ebonisa indlela akhula ngayo njengoMesiya kunye nesampulu encinci yobudlelwane bakhe nabapostile kunye nonina.
Le ngxelo yobomi bukaYesu isixelela, ngokukodwa, imizuzu emihlanu yokubaluleka okukhulu kubomi buka Yesu. Phakathi kwemizuzu emibini yokuqala kukubhaptizwa kwakhe, ebalisa ukuba la manyathelo okuqala esiya kwi-Ekaristi.
Inyani yesibini yezi mfihlakalo nguMtshato weeCanas kwaye indlela ezazibaluleke ngayo izityhilelo zakhe. Isiganeko sesithathu sixela indlela uKristu abuchaza ngayo ubukumkani beNkosi, obabuya kukhokelela kwimfihlelo engaphambi kwexesha ukubonisa ubuThixo bakhe.
Okokugqibela, kwimfihlakalo yesihlanu, elinye lamathuba okugqibela kaYesu kunye nabapostile bakhe ayakuqhubeka, yiyo loo nto kusenziwa isidlo sangokuhlwa sokugqibela, ukongeza kwindlela ephele ngayo ipasika, umbhiyozo kayise
Iimfihlakalo ezikhanyayo ziqala ngobhaptizo lonyana kaThixo. Konke kuqala kuMlambo iYordan, apho uYesu wagqiba kwelokuba abhaptizwe ngumzala wakhe uYohane, owayezakumnceda ukucoca izono zakhe.
UJuan wayeza kuqalisa ukubhaptizwa kwakhe aze amntywilisele emanzini kwaye enze indlela yokuhlanjululwa. Umzuzu uYesu aphuma emanzini, isibhakabhaka sayarha, sahlula amafu entlokweni yakhe saza sakhanyisa isibane eside, samkhomba.
Umzuzu walandela, ihobe lehla ngegama likaThixo, ukuqinisekisa nokukhumbula ubhaptizo, emva koko uThixo wayeza kubabaza ukuba lo yayingunyana wakhe oyintanda. Okokugqibela, uJohn wathi ukuguquka kukaThixo kuzo zonke izono zakhe, ezixolelweyo.
Imfihlelo yesibini iqala ngoYesu eKana, ekunye nonina nabafundi bakhe, ababemenyiwe ngumyeni nomyeni. Yonke into el mundo Ukonwabele isidlo kunye nokusela, emva kwethutyana isiselo siphelile.
Xa kungasekho kusela, iNtombikazi enguMariya isondela kunyana wayo kwaye ichaza imeko, ephendula kuyo ukuba ixesha lalingekafiki. UMaria uxelela abakhonzi ukuba balandele umkhombandlela wabantwana bakhe, abahlala kuwo ngaphandle kwengxaki.
UYesu ubaxelela ukuba bazalise imiphanda phezulu ngamanzi. Enye yeendwendwe ithathe amanzi, ajike aba yiwayini, isitsho ukuba le yeyona wayini intle awakha wayiva, oku kwenza abafundi beNkosi bawabone amandla ayo, yiyo loo nto ingummangaliso wakhe wokuqala.
Imfihlelo yesithathu yenye yezona zimfutshane, ukanti ibamba enye yeentetho zenkosi. U-Yesu, kunye nabafundi bakhe, wasondela kwiqela elithile labantu, bedanduluka ngobukumkani beNkosi kwaye bechaza ngoguquko kunye nendlela ekufuneka eguqukile ukuze angene kuyo.
Imfihlakalo yamanqam iqala emazantsi eNtaba yeThabor, apho wayekunye nabafundi bakhe aba-3; UPedro, uSantiago noJuan. U-Yesu wabaxelela ukuba bamlandele baye encotsheni, ukuze bambonise into, etyhila ubungcwele bakhe nobabalo kubo, ubuso bakhe bukhanya ngokukhanya neengubo zakhe zimhlophe qwa.
Imfihlelo yokugqibela inika elinye lamaxesha abalulekileyo kwimbali kaYesu Krestu, kuba wayekunye nabafundi bakhe beqhekeza isonka newayini, bekhokelela kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela. Ngelo xesha, u-Yesu, wanika intsingiselo yePasika kwaye walumkisa ukuba uzokufa kungekudala, wachaza ukuba umzuzu wokugqibela wePasika usondele ekufeni kwakhe.
Okokugqibela, ndiyakumema ukuba ufunde: «Umthandazo wozuko«Ndiyazi ukuba uya kuyithanda.